Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.: एभरेष्ट बैंकको ३३.३३% हकप्रद आइतबारदेखि बिक्री खुला, कहाँबाट फारम भर्ने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » एभरेष्ट बैंकको ३३.३३% हकप्रद आइतबारदेखि बिक्री खुला, कहाँबाट फारम भर्ने ?
एभरेष्ट बैंकको ३३.३३% हकप्रद आइतबारदेखि बिक्री खुला, कहाँबाट फारम भर्ने ?
काठमाडौं - एभरेष्ट बैंकले आज देखि ३३.३३% हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले ३ः१ अनुपातमा १ करोड ५० लाख ८८ हजार ८७ कित्ता सेयर बिक्री थालेको हो । हकप्रद भर्ने अन्तिम म्याद साउन २२ गतेसम्म तोकिएको छ । एभरेष्टको हकप्रदमा असार ६ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने अभियानमा रहेको एभरेष्टले ३३.३३% हकप्रद ल्याएको हो । यसअघि बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई ७०% बोनस सेयर पनि दिइसकेको छ । यसबाहेक बैंकले मर्ज र एक्वायरको विकल्प पनि खुला राखेको छ ।